တစ်ဦးကပွဲစဉ်အခါ Wish ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! တစ်ဦးကပွဲစဉ်အခါ Wish ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
တစ်ဦးကပွဲစဉ်အခါ Wish ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
2.This bonus will be active each weekend in April 7th – 9ကြိမ်မြောက်, 14ကြိမ်မြောက် – 16ကြိမ်မြောက်, 21st – 23တတိယအကြိမ်မြောက်, 28ကြိမ်မြောက် – 30ဧပြီလကြိမ်မြောက် 2017 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်.
7.အပိုဆုခရက်ဒစ်အတွင်းသင့်အကောင့်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်3ထိုမြှင့်တင်ရေး၏အဆုံး၏အလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
8.ဆုကြေးငွေပမာဏကိုဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိရှေ့တော်၌လျှောက်ထား 30x ၏စံအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်.
9.ဒီမြှင့်တင်ရေးထံမှရရှိခဲ့ပြီးအပိုဆုရန်ပုံငွေများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slot ကဂိမ်းပေါ်မှာကစားရန်သာအသုံးပွုနိုငျ.
10.ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်.
11.ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်း.
12.ရီးရဲလ်ငွေဂိမ်းအပေါ်လုပ်သာလျှင်စီမံခန့်ခွဲရန်အအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်. အခမဲ့ဂိမ်းများအတွက် Play စအပေါ်လုပ်အာမခံထိုအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်မည်မဟုတ်.
13.ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများအတွက်တရားဝင်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု 28 နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
14.အပိုဆုခရက်ဒစ်ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်အောက်ပါဂိမ်းများကိုအပေါ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း: ဂြိုလ်သား, Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, South Park, South Park Reel Chaos, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, လီယိုပတ်ထ, ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း Megajackpot, Isle O’Plenty, Wolf Run, Star Lanterns, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များ, Genie ထီပေါက်, Winstar, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, လင်းနို့လူသား, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နဲ့ညနေပိုင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II and Avalon.
15.ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်. သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ပရိုဖိုင်းကို” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆိုင်းငံ့ဆုကြေးငွေတန်းစီပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အပိုင်း.
16.စံ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ လျှောက်ထား.
17.ထိုသို့မြှင့်တင်ရေးစော်ကားခဲ့ပြီးနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို၏စည်းကမ်းချက်များမပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်ရှိရာကယုံကြည်သည်ဆိုပါကစီမံခန့်ခွဲမှုမဆိုပရိုမိုးရှင်းပေးချေမှုနှိမ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
18.စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ.
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 50% £ 250 အထိပွဲစဉ်